Lavanila: hisy lisitra fahatelo ho an’ny mpandraharaha | NewsMada
Lavanila: hisy lisitra fahatelo ho an’ny mpandraharaha
Miezaka hampanara-penitra ny fandraharahana ny lavanila ny minisiteran’ny Varotra sy ny fanjifana. Voakasik’izany ny fanondranana any ivelany lavanila ho an’ny mpandraharaha. Araka izany, fantatra fa hisy ny lisitra fahatelo ho an’ireo mpanondrana amin’ity taom-pamokarana 2018-2019 ity satria maro ny antontan-taratasy eo am-pikarakarana.
Tany am-boalohany nivoaka, ny volana septambra teo, ny fepetra sy ny lalàna ary ny karazan-ketra samihafa mila arahin’ny mpandraharaha. Teo koa ny pitsopitsony teknika sy ny fepetra takina mikasika ny kalitaon’ny lavanila. Taty aoriana, nasaina nikarakara ny antontan-taratasy tsy feno na tsy nety ny mpandraharaha, ary nisy koa ny hafa nangatahina fanazavana mikasika ny entana naondrany tany ivelany na ny antony namerenan’ny mpanafatra ny lavanila naondrany. Nampidirina tao anatin’ny lisitra faharoa ireo orinasa na mpandraharaha nahavita namaly na nahafeno ny fanazavana nangatahina.
Ary avy eo, tojo amin’ity hamoahana lisitra fahatelo ity araka ny fanazavana etsy ambony. Antony, fanoitran’ny toekaren’i Madagasikara ny lalam-pihariana lavanila, sady anisan’ny vokatra tena fanondrantsika any ivelany ka tsy azo atao ambanin-javatra ny fitantanana sy ny hikarohana ny tsara kokoa hatrany.